RASMI: Goorta la ciyaari doono labada kulan El Clasico xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay – Gool FM
Dajiye August 31, 2020
(Spain) 31 Agoosto 2020. Xiriirka kubada cagta Isbaanishka ayaa ku dhawaaqay caawa oo Isniin ah, goorta la ciyaari doono kulamada horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub 2020/21.
Jadwalka kulamada horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub 2020/21 isbuuciisa koowaad oo caawa la sameeyay, ayaa si rasmi ah u bilaaban doona 12-ka bisha September.
Kooxda Real Madrid oo difaacaneysa koobka La Liga ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kulanka ay kaga daah furan doonto horyaalka xilli ciyaareedka cusub kooxda Getafe, halka Atletico Madrid ay ku soo dhaweyn doonto garoonkeeda Wanda Metropolitano naadiga Seville.
Halka Barcelona oo kaalinta labaad kaga dhameysatay miiska kala sarreynta horyaalka xilli ciyaareedkii hore ay isbuuca koowaad la dheeli doonto kooxda ka soo dalacday heerka labaad ee Elche.
Kulanka lugta hore El Clasico ee kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka Camp Nou 25-ka bisha October 2020, iyadoo kulanka lugta labaad la ciyaari doono 11-ka bisha April 2021.
Dhinaca kale kulanka lugta hore Madrid derby ee u dhexeyn doona kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka Los Blancos 23-ka December 2020, halka kulanka lugta labaad lagu ciyaari doono 7-da bisha March ee 2021.